musha nyika dzakabatana Singers Chris Brown Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
CB inotaura Nhoroondo Yese yeAmerican Celebrity ane zita rezita “Breezy". Yedu Chris Chris Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wose anoziva nezwi rake rinonakidza uye kutamba kwounyanzvi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Chris Brown's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Chris Brown Nyaya dzeChidiki Nechepamhepo Biold Chokwadi: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, Christopher Maurice Brown akaberekwa pazuva re5th yaMay 1989 paTappahannock muVirginia, USA. Iye aive wechipiri pavana vaviri vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Joyce Hawkins nababa vake, Clinton Brown.
Vabereki vaChris Brown Clinton naJoyce.
Nyika yeAmerican yedzinza rakasviba ane Afro-American midzi aingova namakore matanhatu okukura vabereki vake pavakarambana. Zvisinei hazvo, Chris akaenderera mberi nekurarama hupenyu hwemwana akajairwa kuTappahannock muVirginia uko akarererwa naamai vake.
Chris Brown akarererwa kuVirginia.
Kukura kuVirginia, Chris akaona kuti aive nehunyanzvi uye tarenda remimhanzi. Akafuridzirwa namambo mushakabvu wepop - Michael Jackson, wechidiki Chris akazvidzidzisa kuimba nekutamba uyezve akaimba kwaya yeChechi. Hazvina kutora nguva refu mai Chris pavakacherekedza tarenda rake rekutaura uye vakatsvaga kumuita kuti ave nani pariri.
Chris Brown Nyaya dzeChidiki Nechepamhepo Biold Chokwadi: Dzidzo neKubata Buildup
Nezve kumashure kwaChris, akadzidza paEssex High School muTappahannock, Virginia. Ndichiri pachikoro, Chris akasanganisa vadzidzi pamwe nekuita mumakwikwi ematarenda emuno akati wandei.
Chris Brown semudzidzi wepachikoro chepamusoro.
Iye wekuimba prodigy aive achiri kudzidza pachikoro apo paakawanikwa nechikwata chemuno chekugadzira - Hitmission Records. Chikwata icho chaive chakatarisa tarenda nyowani chakasangana naChris achiimba panzvimbo yegasi kwaishandira baba vake.
Chris Brown Nyaya dzeChidiki Nechepamhepo Biold Chokwadi: Basa Rokutanga Upenyu
Akafadzwa netarenda raChris rechisikigo, Hitmission Records yakabatsira kuronga demo pasuru yeiye mudiki uye mushure mezvo akatanga kutsvaga rekodhi rekodhi yaizosaina manzwiro emuno.
Chris Brown aive nemakore gumi nematatu ekuberekwa apo Hitmission Records yakatanga kumutsvakira rekodhi dhizaini.
Pavaive vari, Chris akafadza aimbove mukuru kuDef Jam marekodhi, Tina Davis uyo waakakumbira kuti ave maneja wake. Hazvina kutora nguva refu Tina asati arasa Jobho kuDef Jam uye akanongedzera Chris kumazita akadai seJive Records, J-Records uye Warner Bros Records.
Chris Brown Nyaya dzeChidiki Nechepamhepo Biold Chokwadi: Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Asati aenderera mberi, Chris akatora nguva yekufunga nezvechisarudzo chake achinyatsoziva kuti kusaina rekodhi rekodhi kwaizomubatsira kutanga mimhanzi achiri kuyaruka.
Chris anozopedzisira asarudza maJive rekodhi nekuda kwekubudirira kwavo kubata zviduku zvekutanga senge Britney Spears naJustin Timberlake. Akasainwa kune iyo label mu2004 uye akasiya chikoro chepamusoro gore rinotevera (2005), kuitira kuti atungamire mumhanzi.
Chris Brown aive nemakore gumi nemashanu paakasaina kuJive Records.
Chris Brown Nyaya dzeChidiki Nechepamhepo Biold Chokwadi: Kumuka Mukurumbira Nhau
Mushure mekusainirwa kuJive Records, Chris akatanga kushanda padambarefu rake rekuzvitumidza zita redamba rakaburitswa muna Kukadzi 2005. Iyo Album yaive neyakajairwa singles senge "Run It", "Say Goodbye" uye "Gimme That" yaive budiriro huru uye akachengetedza Chris maviri maGrammy Mubayiro.
Chris Brown anozvitumidza zita rekutanga albhavhavha.
Nekukurumidza kusvika parizvino, Chris Brown akazvisimbisa semumwe wevanonyanya kutengesa mimhanzi maartist ane rake razvino uye 10th Album iri "Indigo" (2019). Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Chris Brown Nyaya dzeChidiki Nechepamhepo Biold Chokwadi: Relationship Life Facts
Chris Brown achiri kuzoroora panguva yekunyora. Zvinyorwa nezve nhoroondo yake yekufambidzana zvinoratidza kuti akave akabatanidzwa kune vasinga pfuure makumi matatu nevakadzi. Anozivikanwa pakati pevakadzi muhukama hwake timeline muimbi - Kelly Rowland, mamodheru - Paris Hilton, Jasmine Sanders naKarrueche Tran pamwe nenyeredzi yeTV - Draya Michele.
Chris anozivikanwazve kuve akadanana muimbi weBarbadian Rihanna mune kudanana kwakatendeuka kushusha zvisati zvaenderera mberi kusvika parizvino Brittany Renner uye gare gare Nia Amey uyo akazvara mwana wake wekutanga anonzi Royalty (Akazvarwa 17th June 2014).
Mufananidzo waChris Brown - nemwanasikana wake Royalty uye Mucheche Amai Nia Amey.
Nezve chinzvimbo chehukama hwaChris panguva yekunyora, ari kufambidzana nemusikana mutsva uye Instagram modhi inonzi Diamond Brown. Chris 'akatanga kubuda naDiamond munaKurume 2019 pakati pemishumo yekuti anga achitarisira mwana wechipiri kubva kune waimbova musikana wake, Ammika Harris.
Chris Brown ari kufambidzana Instagram modhi Diamond Brown panguva yekunyora.
Chris Brown Nyaya dzeChidiki Nechepamhepo Biold Chokwadi: Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Chris Brown anouya epakati class mhuri. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaChris Brown: Clinton ndibaba vaChris Brown. Akashanda semugadziri wezvekugadzirisa panguva yehupenyu hwaChris achiri mudiki uye akarambana naamai vemuimbi iye aine makore matanhatu chete. Nekudaro, Clinton akachengetedza hukama hwepedyo nevana vake kunyanya Chris waakatsigira panguva yese yebasa rake rekuvaka uye kazhinji airidza mweya zvinyorwa kwaari.
Chris Brown nababa vake Clinton.
Nezve amai vaChris Brown: Joyce Hawkins amai vaChris Brown. Akashanda semukuru wezuva rekuchengeta maneja panguva yehupenyu hwaChris achiri mudiki asati arambana nababa vaChris. Mushure mekurambana, Joyce akaroora murume akazove mukadzi anorova, chiitiko chakasangana naChris pakutanga uye pamwe chakakonzera hunhu hwechisimba hwaanomboratidza. Joyce haana kukahadzika padyo naChris uye parizvino akatsaurira account yake ye twitter kusimudzira Basa rake.
Chris Brown naamai vake Joyce.
Nezve hama dzaChris brown: Chris haana hama (hama) asi hanzvadzi yekubereka yakanzi Lytrell "Tootie" Bundy. Lytrell akakurira naChris uye akaenderera mberi achive musayendisiti wechipatara chekurapa. Iye anogara muChesterfield, Virginia panguva yekunyora uye ane mwanakomana anonzi Desan.
Hanzvadzi yaChris Brown's Lytrell "Tootie" Bund.
Nezve hama dzaChris Brown: Kure kubva kumhuri yepedyo yaChris, sekuru nasekuru vake vaive Charles Randolph Brown naMary Elizabeth Baylor apo sekuru vake nasekuru naambuya vaive Clifton William Bundy Sr naMary Elsie Blagmon. Chris ane muzukuru anonzi Desan pamwe nasekuru nababamunini vanozivikanwa saKevin Brown naChristine zvakateerana. Chris ane vakoma vashoma vanozivikanwa saKeeis, Rob, Austin naAaron apo pasina marekodhi evana babamunini vake.
Chris Brown Nyaya dzeChidiki Nechepamhepo Biold Chokwadi: Personal Life Facts
Chii chinoita kuti Chris Brown afare? Gara kumashure apo isu tichikuunzira magadzirirwo ehunhu hwake kuitira kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake. Kutanga, Chris 'persona isanganiswa yeTaurus Zodiac maitiro.
Anodzvinyirira, ane moyo munyoro, anoshanda nesimba uye anovhura mukana wekuzivisa zvinhu nezve hupenyu hwake uye hwakavanzika. Zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kuteerera mimhanzi, kutamba, kutamba mitambo yemavhidhiyo pamwe nekushandisa nguva yepamoyo neshamwari nehama. Chris zvakare ane zvido zvemitambo mutsiva, basketball uye zvetsiva.
Basketball ndeimwe yeanofarira Chris.
Chris Brown Nyaya dzeChidiki Nechepamhepo Biold Chokwadi: Lifestyle Facts
Chris Brown ane huwandu hunofungidzirwa hwemadhora makumi mashanu emamiriyoni panguva yekunyora. Kwakatangira hupfumi hwaChris kunonyanya kubva mumimhanzi yake yekuedza uye zvibvumirano zvekutsigira apo ongororo yemashandisiro ake maitiro uye zvinhu zvinoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Iyo midziyo inosanganisira Chris '$ 4.35 mamirioni eimba kuSan Fernando Valley muTarzana, Los Angeles. Imba yacho inogara pamakota matatu ekirori ine makamuri edeluxe, huswa hwakawandisa unogadzira mapopoma emvura, makomba matatu emoto pamwe nekupa maonero anoshamisa eSanta Monica Mountains.
Chris Brown's $ 4.35 mamirioni eimba kuLos Angeles.
Asides ane penchant kune dzimba dzakanaka nenzvimbo dzinotaridzika zvakanaka, Chris ane zvido mumotokari dzekunze uye ane muunganidzwa unosanganisira kutasva se2016 Lamborghini Aventador SV, Rezvani Beast, 2016 Porsche 911 Turbo S pakati pevamwe.
Chris Brown posing padhuze neake 2016 Porsche 911 Turbo S.
Chris Brown Nyaya dzeChidiki Nechepamhepo Biold Chokwadi: Untold Facts
Kuputira yedu Chris Brown yehucheche nyaya uye biography pano zvishoma zvinozivikanwa kana zvisingataurwe chokwadi zvisingawanzo kuverengerwa mubio rake.
Chris Brown akaberekwa somuKristu uye akakurira kuimba mukwaya yechechi. Akaita mareferenzi anoverengeka nezvaMwari muchiedza chakanaka, chiratidzo chekuti mutendi uye anoita chiKristu sechitendero.
Muimbi uyo ane torso yake nemaoko anenge akaputirwa neattoos haana dambudziko nekunwa doro uye kuputa panguva yekunyora.
Chris Brown ane maTatoo akawandisa kuti aongororwe.
Chris ndiye muvambi werekodhi reti CBE (Chris Brown Varaidzo kana Tsika Beyond Yako Evolution), pasi peInterscope Records. Kunze kwemimhanzi, Chris Brown muridzi we14 Burger King maresitorendi uye tambo yekupfeka inonzi Nhema Piramidhi.
Akagadzira yake pa-screen chimiro firimu kutanga muStomp the Yard mu2007 uye akambobvira akaita mafirimu seTakers (2010), Hondo yeGore (2013) uye Funga Semurume (2012).
Chris Brown MuHondo yeGore (2013).
Chris akasarudzwa kumubairo weGrammy kanoverengeka asi akangotora imwechete muna 2012 paakakunda 'Best R&B Album' ye 'FAME'.
Chris Brown Nyaya dzeChidiki Nechepamhepo Biold Chokwadi: Video Summary
Ndokumbira uwane pazasi, yedu YouTube vhidhiyo Summary yeiyo mbiri. Nomutsa Shanya uye Nyorera kune edu Youtube Channel kune mamwe mavhidhiyo.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Chris Brown Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!